Hab dhaqanno abuuris ah | Tixraaca Fudud Ee Muslimka
Bogga hore/Qeybaha/Dahaaro qaadashada Muslimka/Hab dhaqanno abuuris ah
Maxaa loola jeedaa habdhaqannada abuurista ah?
Hab dhaqannada abuurista ah waa tan uu Allaah ku beeray dadka, oo uu ku kaamil noqdo qofka Muslimka ah faliddeeda, markaasuu wuxuu noqdaa mid leh tilmaamo kuwa u wanaagsan iyo qaabab kuwa u qurxoon, arrinkaana waxaa ku wacan inuu Islaamka daryeelay oo tixgeliyey dhinacyada quruxda iyo kaamil noqoshada ee Muslimka si uu u kulansado wanaagga muuqaalka debedda iyo kan hoose.
Nabigu  wuxuu yiri: “Shan arrimood waa abuuris: Gudniinka, xiiridda tiimaha hoose –bisqinta– jaridda shaarubka, jaridda ciddiyaha, iyo goynta timaha kilkilaha” (Al-Bukhaari 5552, Muslim 257)
Gudniinka: Waa goynta haragga ku yaal afka xubinta gaarka ah (qalfadda) waxaana sida caadada ah arrinkaa la yeelaa maalmaha ugu horreeya ee u dhasha wiilka.
Waana arrimaha diintu dhiirra gelisey ee la isku aadkeeyey, oo ficillo abuuris ah xagga ragga, wuxuuna leeyahay gudniinka faa’idooyin caafimaad oo dhowr ah.
Goynta timaha hoose: waana goynta timaha adag ee k u yaal bisqinta – shuunka – adigoo xiiraya ama si kastaba aad ku goyso.
Jaridda shaarubka, deysashada shaarubka waxay ka mid tahay waxyaalaha bannaan mana aha wax la iska ajar siiyo, laakiin ninka Muslimka ah hadduu deysto shaarubka waxaa saaran inuusan dheereyn hab caadada ka baxsan, oo waa inuu ku daryeelo jarid iyo gaabin.
Deysashada garka: Islaamku wuxuu dhiirra geliyaa deysashada garka oo ah timaha ka soo baxa labada gar iyo laf gareedyada.
Waxaana loola jeedaa badinteeda in la deysto oo aan la xiirin ku dayasho ahaan sunnada Nabiga 
Jaridda ciddiyaha: Waxaa laga doonayaa qofka Muslimka ah inuu ku wadol ciddiyahiisa jarid si aanay u noqon meel ay ku ururaan wasakhada iyo qashinnada.
Goynta timaha kilkilaha: Qofka Muslimka ah waxaa laga doonayaa inuu gooyo timaha kilkilaha isagoo rifaya ama si kale ha u gooyo digtooni ahaan inayan ka soo bixin ur xun.